Sajhasabal.com | Homeयसरी छानिन्छन् राष्ट्रियसभा सांसद, कुन प्रदेशमा कसको कति सिट ?
यसरी छानिन्छन् राष्ट्रियसभा सांसद, कुन प्रदेशमा कसको कति सिट ?
पुस ३०, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले ४० सिट जित हात पार्ने देखिएको छ। प्रदेश २ बाहेक अन्यमा बलियो देखिएको वाम गठबन्धनले प्रदेश ६ मा तीनवटै खुला र तीनवटै महिला जित्ने देखिएको हो।
कांग्रेसले १२ र मधेसकेन्द्रित दलले ४ सिटमा मात्र जित निकाल्ने देखिएको छ। राष्ट्रियसभाको ५६ सिटका लागि माघ २४ गते निर्वाचन हुँदै छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा एक महिलासहित तीन जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था छ। यो खबर नरेन्द्र साउदले आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेका छन् ।